Iskuul lagu barto wadidda 'gawaarida duusha' - BBC News Somali
Iskuul lagu barto wadidda 'gawaarida duusha'
Image caption Kooxda samaysay waxay doonayaan inay xal u helaan saxmadda gaadiidka
Waxay u eg tahay in cid walba doonayso inay soo saarto gaari duula, laakinse Kitty Hawk ayaa haysa sabab aad u weyn.
Waxayba soo saareen gaari duulaya oo dul mariyeen laag weyn oo ku taalla Las Vegas.
Halkaasi waa halka Kitty hawk - oo ah shirkad uu leeyahay ninka wax ka aasaasay Google, Larry Page - ay ku leedahay geerash yar iyo meel tababar lagu qaato.
Waa halka ay dadka cusubi ku bartaan sida loo duuliyo, hanaan qiyaastii u baahan 90 daqiiqo. Badidiis waa in lagu celceliyo waxa la samaynayo haddii ay wax khaldamaan.
Tababarka ayaa ka bilaabanaya qol kombiyuutar oo lagu baranayo labada koontarool ee loogu walaaca badan yahay - waa joogga iyo jihada.
Ka dib wuxuu qofku u gudbayaa duullimaad uu dhulka xarig ugu xiran yahay. Waa tababar aad u adag.
Saynisyahanno sameeyay Antibiyootig cusub
Image caption Halkan waxaa lagu baranayaa sida uu qofku kaga bixi karo hadii uu biyo ku dhex dhaco
Ka dib waxaa ku xiga in qofku uu barto sidii uu kaga bixi lahaa marka uu la kulmo xaalad degdeg ah. Waxaa la samaynayaa in gaarigii oo foorara lagu rido baraag ay ka buuxaan kubbado, ayadoo la eegayo sida uu qofka uga baxayo haddii uu ku dhex dhaco biyo.
Tababarka ah sida hawada loogu leexleexdo waxaa lagu qaataa laagta dusheeda.
Gaariga duula waxaa loogu tala hal qof inuu qaado, wuxuuna u eg yahay sidii dayaaradaha bilaa duuliyaha ah.
Waxaa ku rakiban 10 matoor oo mid kasta uu marwaxad leeyahay.
Shirkaddu waxay saadaalinaysaa in maalin uun ay ku iibin doonto qiime u dhigma kan gawaarida korontada ku socota. Qiyaastii waa $40,000 - $50,000.
Xawaarihiisu wuxuu iminka ku xaddidan yahay 9.5 KM saacadiiba, battarigiisana wuxuu shaqayn karaa 20 daqiiqo.
Image caption Ilaa hadda looma oggola inuu berriga ku duulo
Sababta laagta dusheeda loogu wado ayaa ah ayadoo aysan sharci ahayn in lagu dul duuliyo meel ay dadku ku badan yihiin, ama habeen la duuliyo, laakin taa waa mid imaan doonta marka dambe, sida ay ku haminayaan kooxda samaysay.
Gaarigan wuxuu miisaankiisu yahay 113 kiilo, kaasoo marka la eego nidaamka hay'adda duullimaadyada federaalka ee Maraykanka noqonaya mid miisaankiisa uu fudud yahay, micnuhuna waa in aadan u baahnayn in aad leedahay laysinka duuliyeyaasha. Laakinse sidaasoo ay tahay, wixii culayskoodu ka badan yahay 91 Kiilo, looma oggola duullimaad.
Taasina, marka dhinacyo badan laga eego, waa sheekada dhabta ah ee halkan taalla, kaliya ma aha in gaarigan uu duulo, ee waa mid la heli karo, si sahlanna loo koontarooli karo.